OnePlus ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းအသစ်ကို OnePlus Nord လို့ နာမည်ပေးထားပြီး ဇူလိုင်လအတွင်း မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိ - Burmese Techie
Tik Tok, Viva Video, Mi Video အပါအဝင်တရုတ် applications ၅၉ ခုကို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ အိန္ဒိယ
Games for Weekend! – Burmese Techie Games Week
MacOS မှာ EvilQuest လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ransomware တွေ့ရှိ
FaceApp နဲ့ သတိထားရမယ့် မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
Google Meet extends to meet.new
အရာဝတ္ထုအချို့ကို ဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ Oneplus ရဲ့ Color Filter ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပြီ
YouTube က ကြော်ငြာတွေကို အလွယ်တကူပိတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း
Viber, Honda, Coca-cola အပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က facebook တွင် ကြော်ငြာထည့်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်
iOS အသုံးပြုသူအချို့အတွက် dark mode ကို ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်တဲ့ facebook
Xiaomi က Mi Band5ကို တရုတ်ပြည်တွင် ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက်
မကြာခင်မှာ Dark mode ရရှိတော့မယ့် Facebook android app
Burmese Techie > Blog > Tech Companies > Oneplus > OnePlus ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းအသစ်ကို OnePlus Nord လို့ နာမည်ပေးထားပြီး ဇူလိုင်လအတွင်း မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိ
Posted by Burmese Techie June 25, 2020 June 25, 2020
Image - OnePlus
ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ….
OnePlus 8 series ထွက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်း OnePlus ဟာ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖုန်း ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဖုန်းနာမည်ကိုလည်း OnePlus 8 Lite, OnePlus Z, OnePlus Nord အစရှိသဖြင့် သတင်းအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အခုအခါမှာတော့ OnePlus Nord အဖြစ် နာမည်ပေးဖို့ သေချာခဲ့ပါပြီ။
OnePlus Nord ဆိုတဲ့နာမည်ကို နာမည်ကြီး Tipster Max. J ဆိုသူက ယခုလအစပိုင်းမှာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး Twitter မှာ စတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ဒီ Nord ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သံသယရှိခဲ့ကြပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ OnePlus Nord လို အမည်ပေးထားတာ သေချာခဲ့ပါပြီ။ ဒီသတင်းကို သေချာစေခဲ့တာကတော့ OnePlusZLiteThing ဆိုတဲ့ OnePlus ရဲ့ instagram account မှာ မတော်တဆ တင်ခဲ့တဲ့ ပုံမှာ Nord ဆိုတဲ့ နာမည်ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ ပို့စ်ကို ပြန်ဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
So OnePlus postedabunch of images on Instagram and then deleted em, but yeah, there’s Nord for you 😀#oneplus #OnePlusNord #newbeginnings pic.twitter.com/P1jdOinbkT
ဒါပေမယ့် ဒီပို့စ်ကို screenshot ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အသုံးပြုသူတွေက twitter မှာ ပြန်လည် မျှဝေထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ instagram ပို့စ်မှာ ဖုန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့မှုကို development team က အောင်ပွဲခံနေတဲ့ ပုံနဲ့အတူ Nord ဆိုတဲ့ စာသားပါတဲ့ ကတ်ရယ် ‘Here’s to the first 100’ စာသားပါ ကတ်ရယ်ကို တွေ့ရမှာပါ။
OnePlus Nord ကို Snapdragon 765G, 90Hz display တို့နဲ့အတူ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပြီး multiple ကင်မရာ ပါဝင်မယ်လို့လည်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ထွက်ရှိမယ့်အချိန်ကတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လအတွင်း ဖြစ်မှာပါ။
Tags: one plus OnePlus Nord
Burmese Techie June 25, 2020
Previous Article Android မှာ ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ iOS 14 ရဲ့ features အသစ်များ
Next Article Samsung Galaxy Fold2ရဲ့ ဒီဇိုင်း ပေါက်ကြားလာ
ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း email ကနေ ဖတ်ရန်
4 Offline Games to spend your time in stay-home period
Bring wilds into your room with google search
စောစောရှာ Contacts Tracing app ကို MOHS Myanmar မှ ဖြန့်ချီ
Tik Tok နဲ့ Facebook Videos အတွက် အဆင်ပြေမယ့် Samsung ရဲ့ The Sero TV
Facebook နဲ့ Messenger မှာ အသစ်ပါဝင်လာတော့မည့် Care Reaction
Editors' PicksFacebookHome SliderSocial Media
Copyright © 2020 Burmese Techie